I-Boutique Chic eBlockley - I-Airbnb
I-Boutique Chic eBlockley
I-Gentian Cottage yindlu evalelweyo ngokupheleleyo kwilali entle yaseCotswold eBlockley. Le ndlwana imangalisayo ibekwe ngokugqibeleleyo kwindlela ezolileyo, enembono phezu kophahla kunye neegadi zezindlu ezintle zaseCotswold. Ifakwe kwindawo ezolileyo entliziyweni yeBlockley eyimbali, kodwa kumgama wokuhamba wecafe emnandi necetyisiweyo yezobugcisa, kunye nevenkile ebalaseleyo yasekuhlaleni. I-cottage ikwanayo ne-sun terrace evaliweyo, kunye neendawo zokupaka.
Yakhiwe malunga ne-1780, kwilitye lemveli laseCotswold, iGentian Cottage ibuyiselwe kakuhle kwaye ineempawu ezininzi zomlinganiswa, kubandakanya imiqadi yomthi epeyintiweyo, iindonga zamatye eziveziweyo, kunye nezihlalo zefestile ezilungele ukuphumla ngencwadi. Ukuncoma oku yindawo yomlilo esembindini ngoku eguqulelwe ekubeni ngumlilo wamalahle erhasi ukuze ube lula ukuyisebenzisa. I-cottage ixhotyiswe ngokupheleleyo ngamaziko anamhlanje, kuquka i-Broadband WIFI i-TV enkulu ye-Samsung, nayo i-DVD player kunye ingqokelela yeeDVD zokubukela.
Ikhitshi / isidlo sangokuhlwa esixhotyiswe ngokupheleleyo, kunye nomatshini weNespresso, indawo efanelekileyo yokutya okuphekwe ekhaya.
Uyilo lwendlu yangasese yenza iGentian ibe yindawo efanelekileyo yokubalekela usapho olunabantwana abadala, okanye iqela labahlobo, okanye mhlawumbi indawo enkulu yokubuyela yothando yabucala yababini.
Ithafa lelanga elivaliweyo lilungele ukuphumla kunye nezidlo zasehlotyeni okanye nje iglasi yewayini. I-Gentian Cottage ijikelezwe yintabalala yeendlela zeenyawo ezikhokelela kwiihambo ezithandekayo zelizwe. Siyathemba ukuba uya kuyonwabela le ndawo ikhethekileyo njengokuba sisenza.
IBlockley yilali enoxolo kodwa echumileyo, inee-pubs ezimbini kunye ne-Blockley cafe emangalisayo.
Ukuhamba okumnandi konke emnyango, ukuya eChipping Campden, eLongborough naseBatsford.
IBlockley ikwanecawa yaseNorman eyimbali, kwaye yindawo apho uthotho lwemfihlakalo lwe-BBC 'uBawo uBrown' lufotwa khona.
Nceda uqhagamshelane xa kukho imfuneko njengoko sikuvuyela ukunceda.